Matanjaka indrindra tao anatin’ny 56 taona : mahatratra 350 Km isan’ora ny tafiotra entin’i Fantala | NewsMada
Matanjaka indrindra tao anatin’ny 56 taona : mahatratra 350 Km isan’ora ny tafiotra entin’i Fantala
Na tombanana tsy hiditra an-tanety aza i Fantala, manamarika ny tantaran’ny rivodoza izy satria izy ny matanjaka indrindra tao anatin’ny 56 taona, raha resahina ireo rehetra niforona taty amin’ny ranomasina Indianina. Lasa cyclone tropical très intense izy, nanomboka ny alahady hariva lasa teo. Mahatratra 340 km isan’ora ny herin’ny tafiotra entiny raha 240 km isan’ora ny rivotra miaraka aminy. Omaly tamin’ny 9 ora maraina, tany amin’ny 350 km avaratr’Antsiranana no nisy ny foibeny. Mikisaka miankandrefana somary avaratra andrefana i Fantala ary mihena 12 km isan’ora ny hafainganam-pandehany.
Nitondra rotsak’orana betsaka ho an’ny tapany avaratra atsinanana izy ny alahady satria nahatratra 226,4 mm tao Sambava. Hitohy ny orambe miaraka aminy ho an’Ambilobe, Antsiranana I-II, Vohémar, Sambava, Antalaha ary mihatra ny filazana mena momba ny rotsak’orana. Hanonja be koa ny ranomasina, mirefy dimy metatra ny haavony any amin’ny morontsiraka avaratra atsinanana sy avaratra andrefana. Manan-kery ho an’ny telo andro manaraka ny fampitandremana loza mihatra ho an’ny morontsiraka avaratra andrefana sy avaratra atsinanana. Mbola handrivotra hatrany any amin’ny ilany avaratra rehetra entin’i Fantala. Entanina manokana ny mpampiasa ranomasina rehetra tsy hiandriaka intsony eo anelanelan’i Nosy-Be sy Antsiranana fa hahery be ny ranomasina. Mila mitandrina koa ny mpanjono amin’ny morontsiraka hafa rehetra fa matanjaka ny rivotra, araka ny fanambaran’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly.
Momba ny toetry ny andro anio, mbe sy onja mantanjaka i Fantakka i Fantaklaa atsinananaono amin’ana i Fantala ary mihena 12 km isan’hanorana malefaka sy handrivotra ny faritanin’Antsiranana teo aloha. Handrahona ny andro amin’ny faritra Analanjirofo, Atsinanana ary Menabe. Mandrahona vitsy ny faritra sisa ho an’ny tapak’andro hariva.